Nnukwu ihe ịma aka maka :tali: Colosseum ọhụrụ
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Italy njem ozi ọma » Nnukwu ihe ịma aka maka :tali: Colosseum ọhụrụ
Nnukwu ihe ịma aka maka --tali - Colosseum ọhụrụ
Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị ama na Italytali, bụ Colosseum, ga-adị ọhụụ ọzọ ma dịrị njikere n'afọ 2023.
Nke a ga - abụ ihe ịma aka siri ike na ịma aka nke Minister nke Cultural Heritage.
Ihe oru ngo a lekwasịrị anya na ichekwaba na nchekwa nke ihe mgbe ochie site na iweghachite onyonyo mbụ nke Colosseum ma weghachite ọdịdị ya dị ka igwe dị egwu.
Edebere ikpo okwu na ọkwa ọ dị na oge ndị Flavians ma were ụdị na ọrụ sitere na atụmatụ mbụ.
Ihe ncheta ihe atụ nke knowntali nke a maara dị ka Colosseum ga-enweta ala osisi ọhụrụ nke nwere nnukwu teknụzụ na mkpụrụ obi na-acha akwụkwọ ndụ yana usoro ogwe nwere isi eriri carbon nke na-agagharị ma na-agbagharị dị ka ụdị nke ọkaibe brie naanị nke ga-ekwe nkwa ma lee ụlọ ala ala na ikuku ya. Nke a bụ otu ebe egwuregwu ọhụụ nke Colosseum ga-esi bụrụ na 2023, ihe ịma aka siri ike na ịma aka nke Mịnịsta Italy nke Ihe Nketa, Dario Franceschini.
Ọ ga - abụ “nnuku ọkụ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu” mesiri ndị na-emepụta Milan Ingegneria obi ike, ụlọ ọrụ Venetian meriri, ya na ndị ọkachamara ndị ọzọ, obi ọmịiko nke Invitalia weputara maka ịrụ ọrụ ahụ, kwụrụ ụgwọ kemgbe 2015 na 18.5 nde euro.
“Nnukwu ọrụ ga-enyere aka ichekwa na ichebe ihe owuwu ihe ochie site na iweghachite ọdịdị nke Kọlọsi ma weghachite ọdịdị ya dị ka igwe ihe nkiri dị mgbagwoju anya, "kọwaa onye minista werela echiche a n'obi site na 2014 site na ịmaliteghachi ntinye nke Daniele Manacorda nke ọkà mmụta ihe ochie wee buru ya gaa n'ihu n'agbanyeghị nkatọ na esemokwu nke sitere n'aka ọtụtụ ndị nọ n'ime.
Na taa na-alaghachi na ohere nke ịmegharị ogige egwuregwu achọpụtara ọzọ maka ihe omume "nnukwu profaịlụ" na mmemme ọdịbendị ma ọ bụ nke ntụrụndụ nke mba ụwa. “Amaara m na a ga-enwe esemokwu,” ka onye ozi ahụ na-ekweta, mana “Colosseum bụ akara ngosi anyị; ọ bụ eziokwu na anyị tụlere ya. Ma ọ bụ nnukwu nsogbu maka .tali. "